xuquuqda qaxootiga | Macluumaadka iyo khayraadka ka USAHello | USAHello
Qaxootiga, waddanka u soo guurey, Xalaal degan joogto ah (haysta kaadhka cagaaran) iyo muwaadiniinta Maraykanka oo dhan u qalmaan in loola dhaqmo si sharaf iyo ixtiraam leh. In USA, waxaan oo dhan waxay leeyihiin xuquuq. Macluumaadkani waa inuu kaa caawiyo inaad ogaato xuquuqdaada qaxooti aad. Qeybta hoose ee boggan, waxaad ka heli doontaa links in macluumaadkan in Nepali, Soomaali, Faransiis iyo Carabi.
Macluumaadkan waxaa loogu tala galay in aad loo baro. Waxaa waa in aanay noqon sinaba loo arkaa talo sharci. Ujeedkeena ah waxaa loogu talagalay dadka in loo diyaar garoobo oo aan cabsi.
Non-xoreeyo. muwaadiniinta, oo ay ku jiraan xalaal deganaanshaha joogtada ah, qaxootiga iyo magangelyo doone, guud ahaan waxay leeyihiin xuquuq la mid ah muwaadiniinta.
Haddii aad aaminsan tahay in xuquuqdaada lagu xad gudbay, waa inaad la hadashaa qareen.
Haddii adiga ama xubnaha qoyskaaga waa weligiis u baahan gargaar deg deg ah, isla markiiba wac 911.
Waxaan ku nool yihiin times adag. Falalkii dhowaan ka dhanka dib u dejinta qaxootiga, qaxootiga iyo muhaajiriinta ee Maraykanka ku abuureen cabsi iyo walaac badan. Qof kasta wuxuu leeyahay xuquuq, oo ay ku jiraan qaxootiga, dadka magangalyo doonka ah, Entry Level, waddanka u soo guurey, Xalaal degan joogto ah (haysta kaadhka cagaaran), xoreeyo. muwaadiniinta, iyo shakhsiyaadka ee dalka Mareykanka oo aan status.
Waxaan dhamaanteen u qalmaan in loola dhaqmo si sharaf iyo ixtiraam leh, iyadoo aan loo eegin halka aan joogno ka ama sida aan ku tukado,. Waxaan dhamaanteen leeyihiin xuquuq. khayraadka waxaa loogu tala galay qaxootiga macluumaad degdeg loogu baahan yahay siiyaan. Waa inaad ogaato xuquuqdaada oo ka jawaabaya arrimaha muhiimka ah ee soo wajahay bulshada. khayraadka looguma talagalin in la abuuro cabsi ah hay'adaha fulinta sharciga. Waxaa muhiim ah in la fahmo in shaqaalaha adeegga degdegga ah (booliiska, shaqaalaha caafimaadka, iyo dabdamiska) waxaa laga heli karaa in qof kasta oo kaa caawin in xaalad deg deg ah. Markasta wac 911 xaalad degdeg ah. Ogow xuquuqdaada - xuquuqda qaxootiga.
Maxaa dhacaya haddii wakiilada federaalka yimaadaan si aan guriga in ay ka hadlaan ii?
Waxaa jiray warar sheegaya wakiilada ka Bureau Federaalka ah ee Baarista (FBI) iyo / ama Waaxda Homeland Security (DHS) booqanaya guryahooda qaxootiga in ay ka hadlaan iyaga.
Halkan waxaa ku qoran waxa aad samayn karto haddii uu qof isku dayo in uu gurigaaga soo galaan:
Ha albaabka ma uu furo;
fulinta Socdaalka ama FBI ma iman karaan gurigaada oo aan waaran. Haddii amar la soo bandhigay, hubi taariikhda iyo saxiixaaga. Haddii la saxiixay by garsoore iyo taariikhda waa ansax, waa inaad iyaga ku jiro ha iyo gudan karaan xaqa aad u leedahay in aad aamusto. Haddii amar aan la soo bandhigay, oo kaliya ay ku iman kartaa in haddii adiga ama qof kale oo martigeliya,.
In USA, waxaad xaq u leedahay in ay iska aamusa oo aan wax nidhaahno booliiska. Wax kasta oo aad dhihi kartaa oo waxa loo isticmaali doonaa in aad ka dhanka ah ee maxkamadda. Waxaad u sheegi kartaa wakiilada ee, “Waan la muddici Amendment shanaad ee” oo aadan ku hadlin.
Waxaa jira qareenno lacag la'aan ah oo qiime jaban ku caawin kara. Waad awoodaa heli pro bono qareen on Immigrationlawhelp.org. Oo aad awoodid la xiriir ACLU degaanka.
Ha saxiixin wax
Ha magacaaga on waraaqaha wax saxiixo aan la hadashid qareen.
Hel garyaqaan Aamin ah. Sidoo kale, weydii bulshada si ay ugu doodaan kuu. Haddii lagugu hayo, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho damiin lagu sii daayo iyo. Ha quusan rajada.
Xusuusnow: waxaad xaq u leedahay in aad doorato in aanad ka jawaabin wax su'aalo ah.
Xaqa aad u leedahay in ay u safraan
Weli waxaan u safri karaa meel ka baxsan Maraykanka haysta sharci qaxooti ama kaarka cagaaran?
Waxaan ku talinaynaa shakhsiyaadka ka lix dal - Suuriya, Iran, Sudan, Soomaaliya, Yemen iyo Libya - ha u safri waqtigan, haddii ay tahay mid aad u deg deg ah ama xaalad degdeg ah.
Waxaa jira halis sare oo safarka dibadda USA ee shakhsiyaadka ha US haysan dhalashada.
Haddii adiga ama dadka aad jeceshahay ka baxsan USA iyo ayaa qorsheyneysa inay ku soo laabtaan, waa inaad la xiriirtaa qareen halkan USA ka hor bilaabin safarkaaga. safarka Qofka waa in aad hubisaa in aad waraaqaha oo dhan ka dhigi, oo ay ku jiraan baasaboorka, kaadhka cagaaran, ama dokumentiga safarka ee qaxootiga.
Qaxootiga samayn ma waxay leeyihiin kaarka cagaaran ama dhalashada Mareykanka waa in aan u safro ka baxsan USA waqtigan sabab kasta, aad xitaa haddii aadan ka lix dal oo la odhan jiray.
saraakiisha fulinta sharciga garoonka diyaaradaha iyo dekedda ah ee entries waxay awood u leeyihiin in ay sameeyaan a "search joogtada ah" ee boorsooyinka oo dhan iyo in aad weydiiso su'aalo ku saabsan muwaadinimada iyo faahfaahin safarka. Haddii aad soo xulay wareysi sare garoonka diyaaradaha, waxaad xaq u leedahay in aad weydiisato qareen. Qareenada badan ayaa samaynta isu heli karaa lacag la'aan ah, taas aawadeed.
Haddii adiga ama qof aad garanayso la xiray, waxaad email u diri kartaa Project Assistance Refugee International ka (IRAP) at airport@refugeerights.org, wac ACLU maxalliga ah, oo ay soo sheegaan dadka kale ama’ waayo-aragnimo u American Ururka Qareenada Socdaalka (AILA).
Xusuusnow: Haddii aad safarka, waxaad u baahan doontaa inaad dokumentiyo aad aad ula.
Xaqa aad u leedahay ammaan ee bulshada
Maxaa dhacaya haddii aan ahay dhibane dhibis in aan guriga ama xaafadda?
sharciga aad qaxooti aad siiso sharci ee dalka Mareykanka, iyo waxaad xaq u leedahay inaad hesho daaweyn la mid ah sida muwaadiniinta Maraykanka.
booliiska xaafaddaada waxaa jira in aad u adeegtaan sida xubin ka mid ah bulshada oo aad loo ilaaliyo, marka aad u baahan tahay. Haddii aad tahay dhibane danbi ah, waa inaad isla markiiba wac booliiska: 911.
Haddii aad dareento in aad ku sugan tahay khatar, ama haddii qof hanjabaad adiga ama qoyskaaga ka dhanka ah, ma samayn isku dayaan in ay ka hadlaan iyaga ama u waajahaan. Waa in aad isla markiiba wac booliiska adigoo garaacaya 911.
Haddii aad ka welwelsan tahay ee ku saabsan ammaanka, hadasho qof ee hay'adda dejinta qaxootiga ama qareen.
Haddii aad aad aaminsan tahay ama qof aad garanayso ayaa dhibane dembi ama takooray sababo la xiriira diinta, dhalashadiisa, ama xubin group, sidoo kale waa in aad u sheeg Xarunta Sharciga Southern Saboolnimada ah (SPLC).
Xusuusnow: call 911 haddii adiga ama qof aad taqaan waa khatar.
Xaqa aad u leedahay inaad ku dhaqanto diintaada
Waxaan ku dhaqmaan karaa rumaysadkii aan cabsi ka qabin in lagu dhibaateynayo?
Waxaad xaq u leedahay in ay ku dhaqmaan dastuurka Diinta. Waxaad xaq u leedahay inaad meel lagu cibaadaysto tago, dhigtaan oo maqla khudbadaha iyo muxaadarooyinka diinta, ka qayb qaataan hawlaha bulshada, oo Ilaah u barya in dadweynaha. Haddii aad la kulanto takoorid diinta ama waxaa lala beegsaday sababta oo ah diinta, la xiriir golaha xiriirka islaamka ee America (CAIR).
Xusuusnow: sharcigu ku saabsan yahay dhinaca si aad u ilaaliso.
Xaqa aad u doodo bulshadaada
Qaxooti ahaan, aad tahay doodaha aad u muhiim ah. Your cod ku yeelan karaan saamayn weyn maxaa yeelay, waxaad tahay qaxooti. Waxaad xaq u leedahay inaad:
Wac oo la kulmo saraakiisha la soo doortay ee magaaladaada, gobolka, iyo in Congress si ay u horumariyaan xiriir, iyaga baro oo ku saabsan inta aad ku dartey in ay bulshada, iyo naftooda doondoonaya taageero u dejinta qaxootiga iyo arrimo aad daryeesho ku saabsan.
La wadaag sheekadaada qaxooti ah si ay u caawiyaan beddesho sheeko dadweynaha ku saabsan qaxootiga.
Ku biir codad kala duwan sida shaqaalaha dejinta, madaxda iimaanka, shaqeeyayaasha, veterans military, Madaxda kale ee qaxootiga, iyo xubnaha bulshada taageero si ay tallaabo wada.
Xusuusnow: arrimaha cod aad.
deganaansho joogta ah Laydiin kuwaas oo lagu eedeeyay dambiyo
Haddii aadan weli muwaadin oo lagu xiro ama lagu eedeeyay dembi, hubi in aad qareen fahamsan sharciga imigarayshanka, waayo, dambiyada yaryar oo keeni kara in la masaafuriyo muwaadiniinta aan Mareykanka. Qirto oo qayb ka ah heshiis wiiqi kartaa sharci ah iyo ugu danbeyn keeni kara in ka saarida.
Haddii aad leedahay xukun dembi on diiwaanka, waxaa lagu talinayaa in aad qareen la xiriirtaa in la fahmo waxa kuu furan. Haddii aad awoodo si aad u hesho a "iska dhigo" ama "tirtirto" dembigaada, cadeeyo kara rikoorka, laakiin sharciyada kala duwan ee gobol kasta waa, sidaas darteed waxaa fiican inaad la tashato qareen ku saabsan su'aalahan.
Xusuusnow: la hadasho qareen haddii aad eedeeyay in xitaa dembiyada yar.
Xuquuqdaada haddii aad la waraystay by wakiilka ah federaalka
Wakiilada ka FBI ama DHS doonataan in aad kula hadli. Waxaad xaq u leedahay in ay diiddo in la wareysto, laakiin tani waxaa laga daawan karaa shaki. La hadal qareen ama wakiil ka wakaaladda dejinta ugu horeysay oo ku saabsan codsiga waraysiga.
Haddii aad ogolaato inaad wareysi, waxaad xaq u leedahay inaad soo bandhigin qareen. Waxaad ka heli kartaa adeegyada sharciga ka CLINIC ama ka AILA.
Waxaad dooran kartaa waqtiga iyo meesha wareysiga.
Waxaad codsan kartaa in la ogaado waxa su'aalaha noqon doonaa wareysiga oo ay leeyihiin joogo turjumaan.
Ha siin wax macluumaad been ah inta lagu guda jiro wareysigaaga. Qasab ma aha in aad ka jawaabto dhammaan su'aalaha lagu weydiiyo in aad, haddii aadan ku raaxo.
Haddii aad sugaysid xubinta qoyskaaga in laguu diro Maraykanka, waxaa laga yaabaa in waqti dheer qaadan, laakiin waxa ay weli fursad isku mid ah si aad u codsato dib u dejinta.
Xusuusnow: aad MA siin WAA macluumaad been ah inta lagu guda jiro wareysigaaga. Waxaa loo tixgelin doonaa dembi ah oo keeni karta in cawaaqib xun.
Ogsoonow ilaalo sharci fulinta
Xannibmi karo waa dhaqan ku dheehan yahay sarkaal sharci fulin xaadiriyaan qof in ay dembi ah in qofka laga yaabaa haddii kale lagama yaabo in ay sameeyaan. Tan iyo wakiilada qarsoon mararka qaarkood loola socdo waxaa laga yaabaa in beelaha Muslim ama waddanka u soo guurey, waxaa muhiim ah in had iyo jeer ay u ilaaliyaan kawarhaynta xaaladeed iyo miyir, qaban run in qiimaha aad, oo aan la dagay galay howlaha uu noqon karaa sharci-darrada ah.
Waxaad iyo ehelkiinna kulmi kartaa nooc ka mid ah ilaalada. Ujeedada ilaalo waa ururinta macluumaadka iyo farsamooyinka lagu tilmaami karaa saddex nooc: qarsoonayd, ilqabatinka, iyo ilaalo electronic:
iyo Beeralay surveillance waa marka qofka ma awoodo in la ogaado qof xog ururin iyaga on. Taas waxaa la samayn karaa adigoo raacaya qofka meel fog ka, raadinta iyada oo meelaha qashinqubka la tagay hantida dadweynaha, iyo isticmaalka mikroofanada inay dhegaystaan ​​wada-hadallada.
ilqabatinka surveillance la arki karo iyo waxa lagu sheegay inta badan ay bulshada qaxootiga. Noocan ah ilaalo loo dhammeeyo karo by garaacay on albaabada iyo weyddiinaya, bayaan ka hadlaya deriskooda, iwm.
Electronic surveillance diiradda saarayaa internet socodka, bogagga website, iyo isticmaalka qalabka dhegaysiga. Guud ahaan, socoshada waa hab sharci ah loo isticmaalo by maxalliga ah, gobolka, iyo fulinta sharciga federaalka. The shuruuc iyo xeerar gaar kala duwan yihiin gobol ka gobol oo waxaa lagula talinayaa in ay la hadlaan qareen haddii aad dareensan tahay in aad ka yar tahay ilaalo.
Kormeerka hawlaha internet
Ka taxadir in aadan booqo website-yada laga yaabo in ay qaban fikradaha xagjirka ah ama ku lug leh wada hadalka online kale oo laga yaabaa in qaban aragtidiisa xagjirka ah.
inta badan waxaa jira farqi u dhexeeya Qarni sida waalidku u bartayba isticmaalaya internet-ka iyo sida carruurta ama dhalinyarada u isticmaalaan warbaahinta bulshada ah. Kala hadal carruurtaada iyo dhallinyarada oo ku saabsan waxa ay yihiin goobaha internet ku haboon in ay booqdaan iyo waxa aad iyaga ka filan in ay ka fogaadaan. carruurta iyo hawlaha dhallinyarada 'soco online oo innaba iyaga ma dhiirinaynaa in aad booqato website ama ka qayb qaataan hawlaha online in loo arko dhibaato karin sida. Tixgeli dejinta xeerarka ka hor waqtiga ama xataa la isticmaalayo software in la xaddido karaan isticmaalka.
Waxaa jira barnaamijyadooda aad isticmaali karto si ay u caawiyaan waalidiinta ula socdaan hawlaha telefoonka gacanta ee carruurtooda. Waxa kale oo aad ka heli kartaa sida si ay ula socdaan isticmaalka internetka ee ilmahaaga iyo aad u hesho talo dheeraad ah ka Teensafe.
Xusuusnow: waxaa muhiim ah in taxaddar ku saabsan waxa websites aad soo booqato. Ha booqan goobaha la views xagjirka ah sababta oo ah xukuumadda malayn kartaa in aad ku xiran yihiin argagixisada.
Macluumaad dheeraad ah iyo ilaha
Waxaa jira ururo badan oo bixiya macluumaad waxtar leh iyo xog ku saabsan xuquuqda aad leedahay iyo siyaabaha loo sii naftaada, qoyskaaga, iyo beeshaada amaan. Nasiib darro, sidoo kale waxaa jira warar xan ah iyo war been ah wareegaya on warbaahinta bulshada iyo bulshada online, iyo sidoo kale fiisa doonaya in ay ka faa'iidaystaan ​​qaxootiga iyo muhaajiriinta kale. Fadlan hubi in aad doonato macluumaad laga helay ilo lagu kalsoonaan karo ka dhigi, gaar ahaan marka Boogaadin macluumaad online.
Ma rabtaa in aad ka akhrisan iyo download macluumaadkan afkaaga? Fadlan dooro afkaaga ka hooseeya.
Download macluumaad ku qoran luqado kale
Waxaan diyaar u samaynay qalabkan oo shuraako la ah Adeega World Church (CWS). CWS ayaa posted macluumaadka ku jira afar luqadaha kale:
Read ama download macluumaadkan in Nepali
Read ama download macluumaadkan ee Soomaaliya
Read ama download macluumaadkan in Carabi
Read ama download macluumaadkan ee French
Read ama download macluumaadkan in English
Waad ku mahadsan tahay in ay Church World Service diyaarinta qalabkan si ay u caawiyaan qaxootiga OGTAHAY XUQUUQDAADA.
USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.
xafiisyada dib u dejinta qaxootiga gobolka
Map of socdaalka sharci bixiyeyaasha adeegga
Waayo, ururada aan faa'iido-
Raadi caawimo lacag la'aan ah oo qiime jaban sharci